महिला र पुरुष दुबैमा हुने आत्मशक्ति हामीमा छ : पिंकी गुरुङ – Peacepokhara.com
समूदायको रुपमा भन्ने हो भने हामी कुनै राजनीतिक दलमा संलग्न थिएनौं । पहिलो संविधान सभा निर्बाचनपछी सुनिलबाबु पन्त नेकपा संयुक्तबाट संविधानसभा सदस्य बन्नुभयो । सुनिल दाई मार्पmत हामी पनि राजनिती प्रति जागरुक बन्दै गयौं । प्रत्यक्ष रुपमा राजनीतिमा नलागे पनि हामीले सुनिलदाईलाई सहयोग गर्नु पर्छ भनेर जोड ग¥यौं । धेरै साथीहरु त्यो अभियानमा लाग्यौं । त्यसपछि अघिल्लो चुनावमा एमाले पार्टीमा समूदायकै रुपमा प्रवेश ग¥यौं ।
चुनाव ताका संबिधान सभा भित्र प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्ने कुरा चाही थाहा थियो । त्यहाँबाट आफ्नो अधिकार लेख्नु पर्छ र प्रतिनिधि पठाउनु पर्छ भनेर सुनिल दाईले कुरा राख्नु भयो । तर एमाले पार्टी भित्र हाम्रो सदस्यताको कुनै बैधानिकता पनि भएन र कुनै पहिचान पनि भएन । पार्टी प्रवेश त गरर्यौ तर त्यसमा पार्टीले चुनाव पछि हामीलाई त्यति धेरै प्राथमिकता दिएन । पार्टीले कहिल्यै बोलाउँदा पनि बोलाएन । यो मुद्धा कसरी उठान गर्ने भन्ने पनि भएन । हामी पनि आफ्नै कार्यक्रम तिर व्यस्त भयौ र पार्टीको भरमा परेनौं । त्यतिधेरै प्राथमिकता नदिदाँ राजनिती प्रती अलिकति बितृष्णा पै्रदा भएको थियो । राजनीतिक पार्टी यस्तो हो भनेर कतै लाग्ने सोच बनाएनौं । त्यसैले बुझेर लागेको मेरो पहिलो पार्टी नयाँ शक्ति नै हो ।
राजनीतिक चेतना,राजनीतिक धर्म भनौ गीत संगीत भनौ एउटा एडिक्सन जस्तो हुँदो रहेछ । नभइ नहुने जस्तो पनि । २०४६ सालको आन्दोलनमा पनि मेरो मनमा केही न केही राजनीतिक प्रभावले ठाउँ जमाएको थियो । राजतन्त्रको विरुद्धमा प्रजातन्त्रका लागि आम नेपाली जनता सडकमा उत्रिएको त्यो अबस्थामा जोसुकैले पनि राजनितीमा लाग्ने वा राजनितीलाई बुझ्ने प्रयास गर्ने नै भए । २०४६ सालको आन्दोलन चलिरहँदा एक दिन म पनि गएको थिए । त्यो बेलादेखि नै मलाई राजनीतिको बारे चासो बढ्दै गएको हो । तर २०४६ सालको आन्दोलनमा प्रत्यक्ष मेरो आँखाले नै पुलिसको गोली लागेर सडकमा ढलेको मान्छेलाई अरुले खुट्टा समाउँदै तानेर अस्पतालमा लगेको दृष्यले मलाई मेरो बाल मानसिकतामा ठूलै असर पु¥यायो । जसले गर्दा तत्काल मैले राजनितीमा लाग्ने सोंच परिवर्तन गरें ।
तर,अहिले चाही नेपालको परिवेशमा हेर्दा हरेक कुरा राजनीतिक रुपमा अड्किने राजनीतिक सहयोग समर्थन र पहुँच र संरक्षण भएन भने यो कुनै पनि मुद्धाहरु अगाडि बढ्न गाहे हुने अबस्थाहरु रह्यो । हाम्रो विगतको पाठ एउटा सिकाई र भोगाईको अनुसार पनि हामीले के सिक्दै आयौ भने जसरी हामीले एड्भोकेसी गर्दै आयौ,हाम्रो संजाल र पहुँच विभिन्न क्षेत्रमा बढायौ त्यसकै आधारमा अहिलेको संबिधान निर्माण प्रक्रियामा हाम्रो बिषय बस्तुहरु लेखिएको हो । सुनिलबाबु पन्त राजनीतिक पार्टीमा संलग्न नभएको भए अहिलेको संबिधानमा हाम्रो अधिकारको कुरा लेखिने थिएन । संबिधान त बन्यो,बिउ त रोपियो अब त्यसको बोटलाई कसरी स्याहार गर्ने र कस्तो फल फलाउने भन्ने त बाँकी नै छ । संबिधानमा त लेखियो तर त्यसको आधारमा कानुन कस्तो बन्ने ? त्यसको कार्यान्वयन कस्तो हुने र त्यसको आधारमा कस्तो समाज निर्माण गर्ने ? भन्ने कुरा पछिको कुरा भयो ।
यो कुराहरुलाई सामाजिक रुपमा संबिधान र कानुनले बोलेको छ त्यो कुरालाई सामाजिक रुपमा स्थापित गराउन, जनतालाई सचेत गराउन, राजनीतिक पार्टी देखि लिएर राज्यका विभिन्न निकायहरुमा यो बिषय बस्तुलाई उठान गर्न राजनीतिक प्रतिनिधित्व र सहभागी गराउनका लागि राजनीतिक प्रवेश अपरिहार्य छ जस्तो मलाई लाग्छ । किनभने समूदायलाई जस्तो खालको समूदायलाई कुन स्तरसम्म लैजाने त ? अहिले जस्तो समूदायको स्थिति छ त्यो पहिले भन्दा धेरै सुध्रिएर आएको छ, तर पर्याप्त छैन । अझै समस्या र चुनौती धेरै छन् । गर्नुपर्ने कामहरु धेरै बाँकी छ । हाम्रो समूदायका समस्या हामीलेनै नेतृत्व गरेर आफ्नो समुदायको जीवनस्तर आर्थिक स्तर, सामाजिक स्वीकार्यता अनी बौद्धिता, ज्ञान र सीपलाई कसरी पुरापुर उपयोग गर्ने भन्ने अहिलेको मुख्य बिषय हो । त्यसैले यो समुदायका साथीहरुलाई राजनीतिक पार्टी तिर कसरी संलग्न गराउने भन्ने खालको एउटा सोचको कारणले राजनीति संलग्न र समावेशी हुनु जरुरी देखेर राजनीतिमा प्रवेश गरेका हौं ।
नयाँ शक्तिनै रोज्नुको कारण ?
नयाँ शक्ति रोज्नुको कारण धेरै छ । जतिखेर डाक्टर बाबुराम भट्टराई माओवादीमा हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर पनि म माओवादीको सिद्धान्त भन्दा व्यक्तिगत रुपमा बाबुराम बिचारबाट प्रभावित थिए । उहाँ क्षमतावान, बौद्धिक र बिद्धान हुनुहुन्छ । जसरी आम नेपाली जनताले उहाँलाई बुझ्नु भएको छ र स्वीकार्नु भएको छ त्यसैगरी हामीले बुझेका छौं । उहाँले सरकारको नेतृत्व गरेको समयमा भएका कामहरु पनि निकै प्रशंसनिय र जनप्रिय छ । त्यो समयमा भएको मुख्य काम मध्य यौनिक तथा लैंगिक समूदायलाई भनेर बजेट विनियोजन गरिएको थियो । उहाँको व्यक्तिगत आचरण पनि भ्रष्टाचार विरोधी छ । देश गरिव होईन,जनता गरीव भए । भ्रष्टहरुसँग धेरै अकुत सम्पत्ती छ । त्यो कसरी भयो ? यसको सोझो उत्तर भ्रष्टाचार हो । देश चाही उन्नती तिर छैन देशको जुन खालको आर्थिक श्रोत छ त्यसको दुरुपयोग गरेर व्यक्ति सम्पन्न भइरहेको छ । त्यसैले आर्थिक सम्बृद्धि र शुसासनको मुद्धा लिएर नयाँ शक्ति आएको छ । यसले जुन खालको मुद्धा उठान गरेको छ त्यो निकै समय सापेक्ष छ र त्यो अहिलेको आबश्यकता पनि हो ।
कसरी नजिक हुनु भयो ?
सुनिलबाबु पन्त पहिला हाम्रो संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । बाबुराम भट्टराई र सुनिल दाईको एकदम राम्रो चिनजान थियो । संबिधान बन्ने प्रक्रियामा हाम्रो मुद्धाहरु कसरी उठान गर्नु पर्छ र कुन कुन बिषय बस्तुहरु उठान गर्नु पर्छ भन्ने कुरा संवाद समितिको सभापति भएको हैसियतले हामीले प्रत्यक्ष रुपमा बाबुराम भट्टराई भेट्ने मौका पायौ । र त्यो संबाद समितिको सभापति भएको हैसियतले हाम्रो बिषय बस्तु उहाँले मनन गर्नु भयो र त्यो अनुरुप संबिधानमा समाहित पनि भयो । जसले गर्दा नेपालको संबिधानमा हाम्रो बिषय बस्तुलाई लिपिवद्ध गरिएको छ । संबिधानमा हाम्रो पहिचान र अस्तित्वको सम्मान गरेको छ ।
आम नेपाली जनता मात्रै नभएर यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समूदायहरुले आफ्नो एउटा आत्म गौरब गर्ने बातावरण बन्यौ । त्यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । यदि उहाँ नकारात्मक हुनुहुन्थ्यो, हामी प्रति हाम्रो मुद्धा प्रति सकारात्मक हुनुहुन्थेन र यो बिषय बस्तुलाई संबिधानमा समेट्नु हुँदैन भन्ने खालको सोच भएको भए देखि सायद अहिले जुन खालको अबस्था थियो हाम्रो त्यो भन्दा धेरै पछाडि हुन्थ्यौं । अझै धेरै संघर्ष गर्नु पथ्र्यो । आज सम्पूर्ण यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समूदायले स्वतन्त्र तहको जीवन जिउन पाइरहेको छ । खुशीको हाँसो हास्न पाइरहेको छ । समाजमा आफ्नो पहिचान सहितको जिवन यापन गर्न पाउने वातावरण सिर्जना भएको छ ।
कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले क्लष्टरमा तेस्रोलिंगी भनेर राखेको मलाई अहिलेसम्म अनुभव छैन । तर नयाँ शक्तिको एउटा नयाँ प्रयास भएको छ । तेस्रोलिंगीको आफ्नो पहिचानलाई आत्मसात गरेर पार्टीगत रुपमा पनि आफ्नो फरमेसन भित्र शब्दलाई समाहित गरेको छ । यो एकदम स्वागत योग्य र प्रशंसनिय छ । यो हाम्रो लागि प्रेरणादायी कुरा हो । त्यसैले पनि हामी नयाँ शक्तिमा लागेका हौ र यही राजनीतिक पार्टीले हाम्रो मुद्धालाई अझै उठान गर्न सक्छ र समाज निर्माण प्रक्रियामा भनौ या देश निर्माण प्रक्रियामा हाम्रो बिषय बस्तु र हाम्रो मुद्धालाई समानुपातिक ढंगबाट समावेशीको आधारमा संलग्न गर्दै लैजान्छ भन्नेमा हामी बिश्वस्त छौ ।
मलाई लाग्छ, हामीले अधिकारको आवाज त उठाउँछौ तर नेपालमा अझै पनि जनमानसमा के विचार र मान्यता छ भने अधिकार मागेर होइन खोसेर लिनु पर्छ भन्ने छ । एउटा राजनीतिक पार्टीले समग्र आम नेपाली जनतामा गएर समूदायका लागि विभिन्न सिमान्तकृत र पीछडिएको वर्गहरुको लागि बास्तविक रुपमा काम गर्छ भन्ने हो भने त पार्टीगत रुपमा आफ्नो मुद्धा हामीले उठान गर्नु भन्दा पार्टीले मुद्दाको पहिचान गरेर त्यसलाई समावेश गर्दै लैजानु पर्ने पार्टीको नैतिक जिम्मेवारी हो । मलाई लाग्छ यो कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले सुरुवात गरेको छैन । म आग्रह गर्न चाहन्छु कि नयाँ शक्ति पार्टीले आफ्नो राजनीतिक पार्टी भित्र यो समलिंगी तेस्रोलिंगी बिषय बस्तुको टड्कारो एउटा बर्निङ इश्यु के हो र त्यो बिषय बस्तुलाई कसरी उठान गर्नुपर्छ भन्ने खालको अभ्यास पार्टी आफैले सुरुवात गर्नुपर्छ । त्यसो भएमा पार्टीप्रती हामीले धेरै गर्व गर्न सक्छौ, पार्टी प्रति धेरै बिश्वास गर्न सक्छौ र पार्टी प्रतिको सद्भाव र बिश्वास अझै माथि बढाउनका लागि मद्धत गर्छ ।
अहिलेसम्म हामीले समूदायको लागि मात्रै मुद्धा उठान गर्र्यौ । हामी तेस्रोलिंगी समलिंगीहरु अरु नेपाली जनता भन्दा क्षमतामा पनि कम छैनौं । केहि गर्नुपर्छ भन्ने मोटिभेसन, प्रेरणा र उत्साह छ । जोस जाँगर पनि हामीमा छ । महिला र पुरुषमा हुने दुईटै आत्मशक्ति पनि हामीमा छ । तर अझै पनि त्यो कुरालाई आत्मसात र मनन गर्न सकिरहेको छैन । हामी जस्तो उत्साहित र दोहोरो शक्ति भएको, महिला र पुरुष दुईटैको आत्मशक्ति भएको मान्छेलाई राज्यले कसरी युटिलाइज्ड गर्न सक्छ र राजनीतिक पार्टीले त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्न सक्छ भन्ने कुरा अझै अभ्यस्त भइसकेको छैन । त्यसले गर्दा यो राज्य र राष्ट्रका लागि घाटा हो ।
नयाँ शक्तिलाई दिने कुरा चाही के हो ?
नयाँ शक्ति अहिले प्रारम्भ अबस्थामै छ । पार्टी घोषणा भइसकेको अबस्था छैन । अझै संगठनात्मक बिस्तारमा अझै पार्टी छ । संगठन विस्तार गर्ने र पार्टी घोषणा गर्ने संघारमै हामी छौ । भविष्यमा यो पार्टीलाई कस्तो संरचना बनाउने ? यस्को संगठनात्मक हैसियक के हुने ? आम नेपाली जनमानसमा यसको प्रभुत्व र प्रभाव कस्तो बनाउने ? नेपालको राजनीतिक पार्टी भित्र बैचारिक द्धन्द्धमा अरु पार्टी भन्दा यसलाई कसरी अगाडि लिएर आउने ? यि कुराहरु अहिले चुनौतीपूर्ण कुराहरु हुन् ।
अहिलेसम्म कुनै पनि राजनीतिक पार्टीहरु नेपालका राजनीतिक पार्टीहरु देश र जनता मुखी भएको म देख्दिन । एकदम अस्वस्थ राजनीतिक वातावरण छ । राजनीतिक कुसंस्कार छ र धेरै राजनीतिक होडवाजी छ । आफ्नो सरकार भएन भने त्यो सरकारलाई सहयोग र समर्थन होइन सरकार ढलाउने र आफ्नो सरकार चलाउने जुन खालको अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा छ । त्यसले देश र जनतालाई प्रत्यक्ष रुपमा मारमा पारिरहेको छ । नयाँ शक्ति पार्टी र हामीले जस्तो खालको क्लिन नेपाल ग्रिन नेपाल भन्ने अभियान लिएर आयौं । त्यो पनि आमनेपाली जनमानसमा बिषय सुन्दा सामान्य जस्तो लाग्छ । एउटा स्वच्छ समृद्ध समाजको निर्माण भएमा समृद्ध समाज र स्वच्छ मानसिकताको आधारमा नयाँ नेपालको निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने बिचार सहित हामीले अभियान संचालन गरेका हौं ।
नयाँ शक्तिको अहिलेको एजेण्डा के छ भने अधिकारको मुद्धाहरु संबिधानमा त लेखिसकिएको छ तर पूर्ण छैन । ७० प्रतिशत जति अधिकार संबिधानमा लेखिएको भएपनि थप अधिकारको मुद्धाहरु लेखिनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । र अहिले अधिकार भन्दा विकास निर्माणमा कसरी लैजाने भन्ने मुख्य एजेण्डा हो । अधिकारको लडाई सदियौ देखि लड्दै आयौ र संबैधानिक रुपमा त्यो स्थापित पनि भइरहेको छ केही हदसम्म । विकास निर्माण प्रक्रियामा नेपाललाई कसरी अगाडि लैजाने र देश र जनालताई समृद्ध कसरी बनाउने भन्ने तिरको मुख्य हाम्रो एजेण्डा हो । र त्यसमा बौद्धिक रुपमा, बैचारिक रुपमा धेरै पोख्त ज्ञान र बुद्धी भएको भनेर बाबुराम भट्टराईलाई आम नेपाली जनताले विश्वास गरेका छन् । अव यसको ठोस एजेण्डाहरु कसरी लैजाने भनेर पार्टीको योजना र निर्णय हुन बाँकी नै छ ।
राजनीतिक पार्टी भित्र स्वार्थ हुनु भएन । निस्वार्थ भावना हुन जरुरी छ । राजनीतिक पार्टीको प्रयोग गरेर आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा जसले हेर्छ त्यसलाई पार्टीगत रुपमा कारवाहीको व्यवस्था हुनुपर्छ । हामीले जस्तो खालको नीति नियम लिएर आएका छौ त्यो कुरालाई एकदमै हृदयंगम गरेर आफ्नो जीवनमा लागू गर्न सक्दैन भनेदेखि पार्टीगत रुपमा त्यो व्यक्तिले पार्टी सदस्यताको हैसियत पनि राख्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो । पार्टीको जुन मिसन छ, जुन खालको भिजन छ, जुन खालको कोड अफ कन्डक्ट छ, जस्तो खालको रुल एण्ड रेगुलेसन छ त्यो दायरा भित्र आफू अटाउन सकिदैन भनेदेखि आफूले त्यो पार्टीको परिधी भन्दा बाहिर बसेकै राम्रो हुन्छ ।
आफ्नो स्वार्थ मात्रै हेर्ने राजनीतिक पार्टीले देश र जनताका लागि केही पनि गर्न सक्दैन जुन अहिलेको राजनीतिक पार्टीमा भइरहेको छ । त्यही कारणले नेपाल समृद्ध हुन सकिरहेको छैन । नेपालमा आर्थिक क्रान्ति आउन सकेको छैन । संसारका कैयौ मुलुक नेपाल भन्दा पीछडिएको अवस्थामा भएर पनि अगाडी पुगीसके । समग्र रुपमा राज्य संचालन गर्ने निकाय तिरको संरचना कस्तो छ र त्यो संरचनाले कसरी काम गरिरहेको छ त्यो कुरालाई पनि मुल्याङकन गर्नु जरुरी हुन्छ । अहिले नयाँ शक्ति घोषणा समेत भएको छैन । सरकारमा, सदनमा पनि छैन तर निश्वार्थ रुपमा यसले जनताका लागि काम गरिरहेको छ । त्यसैले मलाई लाग्छ यो जनताकै लागि निर्माण भएको नयाँ शक्ति हो । अन्य राजनीतिक पार्टी भित्र जस्तो खालको संरचना छ त्यो भन्दा नयाँ शक्तिमा फरक छ । त्यो संरचनाले गति लिएर काम गर्न सक्छ भन्ने मलाई बिश्वास छ ।
अन्तरिम केन्द्रिय परिषद् सदस्य